MISAOTRA ANAO RY TOMPO !
Raha vao mifoha iny, isaky ny maraina,
Mahita ny tana-masoandro miposaka ;
Manavatsava, amin'izato fahasahiana,
Ao amin'ny efitry ny trano, izay natoriana.
Mivimbina ny arahaba, entina ho zaraina ;
Mitondra herijika maro lafy, ho atosaka.
Ny singa voalohany, tonga ao an-tsaina,
Dia ny mitsaoka, an'ilay Jesoa Tompo ;
Niahy sy nitahy, nandritra iny alina iny,
Amin'ny loza maro be, fahita ankehitriny.
Ka mbola nofohaziny, isan'ny velon'aina,
Eo anivon'ny natiora, anisan'ny hanompo.
Ny dera, laza, hery, haja anie, no atolotra,
Ho an'ilay Andriamanitra, telo izay iray ;
Noho ny fitiavany lehibe, tsy misy fetra,
Izay nozarainy mitovy, ho an'ny rehetra.
Miampy sitraka feno, mivoaka imolotra ;
Ho Azy, anio, ampitso ary ho mandrakizay.
Ka ho arahana, ho hajaina anie ny didy folo ;
Sy ny fitiavana namana, toy ny tena ihany.
Halavitana marindrano, ny manao kolikoly,
Sy ireo fandrika maro be, velarin'ny devoly.
Dia ny tsara ihany, no hameno ny tontolo ;
Eo ambany fitahian'i, Jesoa Kristy hatrany.
Sokajy : fiainana, Fiderana, Vavaka